Xulka England oo guul ka gaaray Malta iyo kulammadii kale ee la ciyaaray isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018… + SAWIRRO – Gool FM
Xulka England oo guul ka gaaray Malta iyo kulammadii kale ee la ciyaaray isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018… + SAWIRRO
Haaruun October 8, 2016
(London) 08 Oktoobar 2016 – Xulka qaranka Ingiriiska ayaa guul ka gaaray dhiggooda Malta kulan ay ku soo dhaweeyeen garoonka Wembley kaasoo ka tirsanaa Qeybta F ee isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018.
Goolka hore waxaa u daah furay xulka England 29’’daqiiqo Daniel Sturridge kaasoo madax xoog leh ku hubsaday shabaqa Malta, kaddib karoos wacan oo uu ka helay wiilka ay ka wada tirsan yihiin Liverpool ee Jordan Henderson.
Caawinta Jordan Henderson ayaa ka dhignayd inuu laacibkan ku lug lahaa 3 gool shantii kulan ee ugu dambeeyey oo uu u ciyaaray kooxdiisa iyo dalkiisa, hal gool waa uu dhaliyey 2 gool oo kale waa uu caawiyey.
Daniel Sturridge goolkan uu dhaliyey waxa uu ahaa goolkiisii 7-aad oo uu u dhaliyo xulka qaranka waa wayn ee England.
Inta aan la aadin qeybta nasashada 38’daqiiqo waxaa xulka saddexda libaax goolka labaad u dhaliyey Dele Alli, kaddib markii kubad uu goolhayaha Malta ka badbaadiyey uu markale ku celiyey, sidaas ayaana lagu kala nastay kulanka xulka England oo ku hoggaaminaya 2-0.
Dele Alli ayaa sidaasi ku dhaliyey goolkiisii 9-aad ee kooxdiisa iyo dalkiisa uu u dhaliyey sanadkan 2016 dhammaan tartammada.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay ayeysan waxba iska bedelin natiijada ciyaarta, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-0 oo uu ku adkaaday xulka qaranka England.
Xulka England ayaa sii wata rikoodhkiisa guulaha iyadoo aan laga adkaan 19 kulan oo ay garoonkooda ku ciyaareen isreeb-reebka koobka Adduunka, markii ugu dambeysay oo looga adkaado garoonkooda isreeb-reebka koobka Adduunka waxa ay ahayd sanadkii 2000 waxaana 1-0 uga badiyey xulka Germany.
Kulamadii kale ee la ciyaaray isreeb-reebka koobka Adduunka 2018 iyo natiijooyinkii ka soo baxay:-
Azerbaijan 1 – 0 Norway
Armenia 0 – 5 Romania
Xiddigaha ugu orodka dheereeya Premier League oo la soo saaray...(Waad la yaabi doontaa qofka hogaanka haya iyo kan ugu dambeeyaba!)